Haweeney lagu eedeeyay inay sixirtay ninkeeda oo xanuunsanaya | Qaran News
Haweeney lagu eedeeyay inay sixirtay ninkeeda oo xanuunsanaya
Writen by Qaran News | 10:43 am 9th Feb, 2020
Esther Kiama oo macallin ka ahayd magaalada Nyeri ee bartamaha dalka Kenya, ayaa maalin maalmaha ka mid ah waxaa loo soo sheegay in seygeeda David uu xanuunsan yahay.
“Ma ahan xanuun sahlan,” ayuu yiri qofkii soo wacay, wuxuuna intaa u sii raaciyay: “waa xanuun dhanka maskaxda ahi.”
Waxay ahayd sanadkii 2005. Kiama muddo sanad ah ma aysan arkin seygeeda oo ganacsi ku lahaa magaalo kale oo ka fog halka ay deggan tahay. Waxaa jirtay in marar badan ay ugu tagtay magaalada uu deggan yahay balse marnaba ma aysan arkin wax ay ku qoonsato caafimaadkiisa.
Balse markii loo sheegay in uu xanuunsan yahay, ayay markiiba aaday halkii uu joogay.
“Waxaa khasab noqotay in aan soo kaxeyno si aan u daweyno,” ayay tiri Kiama oo la hadashay BBC-da.
Kiama waxay sheegtay in seygeedu “uu isaga isla hadlayay oo uu gacmaha tuur-tuurayay, wuxuuna u muuqday qof la hadlayo dad aan loo jeedin”. Xanuunkii hayay David ayaa markii dambe dhakhaatiirtu ku sheegeen xanuun afka qalaad lagu yirahdo ‘bipolar disorder’ oo ah xanuun dhimirka ku dhaca.
“Waxa uu ka sii daray markii aan gurigayaga keenay. Guriga ayan uga tagi jiray, waxaana dhacday in maalin uu gubay saqafka kore ee guriga, isaga oo leh waxaan halkaa ka raadinayay dad uusan aqoon waxa ay yihiin.”
La yaab ayay ku noqotay Kiama, mana aysan fahmin halka laga gaaray ninkeeda.
‘Waad sixirtay wiilkayaga’
Waxay damacday bal in ay cusbital geyso oo halkaa lagu soo daweeyo balse qaraabadiisa ayaa u diiday arrintaasi.
Waxay ku eedeeyeen in iyadu ay sixirtay David. “Aabihii ayaa u yimid wuxuuna igu yiri: ‘waxaa la ii sheegay in wiilkeygu uu xanuunsan yahay, waxa aanan halkan u imid in aan kaxeeyo waayo adiga ayaa sixray.'”
In seygeeda oo ay wada noolaayeen 15 sano xoog looga kaxeysto waxa ay ahayd arrin xanuunkeeda leh oo walwal ku abuurtay Kiama iyo afar carruur ah oo ay dhashay.
“Markii hore waan amakaagay, balse waxaan ahay qof Ilaah rumeysan. Inkastoo aan markii hore aad u walwalay, haddana waxaan niyadda geliyay in dhibaatadani ay mar uun dhammaan doonto,” ayay tiri Kiama.
Dhanka kale, waxaa u muuqday in xaaladda caafimaad ee seygeeda ay maalinba maalinta ka dambeyso sii xumaaneysay.
Balse maadaama qoyskiisu ay rumeysnaayeen in iyadu ay sixirtay, marnaba iskuma ay dayin in ay cusbital geeyaan oo laga daweeyo xanuunka haya.
Xanuunnada ku dhaca dhimirka ayaa dalka Kenya, dadku waxay u arkaan sixir ama habaar, mana geeyaan cusbital ama xarun caafimaad dadka cudurradaasi qaba.
Wasaaradda caafimaadka ee Kenya ayaa sheegeysa in dad badan ay cudurradan qarsadaan, halkii ay daryeel caafimaad ka raadsan lahaayeen.
Hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegeysa in qiyaastii afartii qofba uu hal qof la xanuunsan yahay cudurrada ku dhaca dhimirka ama maskaxiyan uu xanuunsan yahay.
Gudaha Kenya, lama hayo xog muujineysa tirada dhabta ah ee dadka qaba xanuunnada dhimirka, taa oo ka dhigan baahida loo qabo in arrintaasi wax laga qabto.
Saddexdii sano ee xigtay David wuxuu culeys ku ahaa waalidiintiisa, gaar ahaanna hooyadii oo waayeel ahayd isla markaana mararka qaar xanuunsanayd.
Mararka qaar waxaa dhaceysay in Kiama ay la soo xiriiraan dadka deriska la ah waalidiinta David, kuwaa oo ku soo wargelinayay in ay liidato xaaladda caafimaad ee Seygeeda.
“Mararka qaar waxaa la ii soo sheegayaa isaga oo magaalada iska dhex wareegaya, marka baabuur baan u kireyn jiray si aan ugu celiyo halkii uu ka soo baxsaday,” ayay tiri Kiama. Mararka qaar cunno ayay usoo karin jirtay.
Balse wali waxaa lagu eedeynayay in iyadu ay sabab u tahay dhibaatada haysata ninkeeda.
“Mar waxaa jirtay uu faas ama baangad ii soo qaatay, uuna igu yiri adiga ayaa sixray balse waxaan ku iri haddii aad I disho yaa cunno dambe kuu karin doono. Markaa ka dib ayuu tuuray faaskii uu sitay,” ayay tiri.
Muxuu yahay cudurkan dhimicka ku dhaca ee afka qalaad lagu yirahdo ‘bipolar disorder’?
Waxaa jira laba nooc oo ka mid ah cudurkani. Mararka qaar qofka uu hayo cudurkani waxaa muuqaneyso farxad iyo firfirxooni xad dhaaf ah, halka mararka qaarna uu noqonayo mid aad u murugeysan.
Waxyaabaha sababa cudurkan lama sheegin ilaa haatan haseyeeshee, khubarada caafimaadka ayaa waxa ay sheegayan in ay suurtagal tahay in uu ka dhasho qofka oo isku buuqa ama aad u walwalo marka uu yaryahay ama xitaa uu noqon karayo xanuun la kala dhaxlo.
Kiama ayaa BBC-du u sheegtay in ay u adkeysan weyday in ay fiirsato xaaladda ninkeeda, waxaase uga sii darnaa eedda ah in ay iyadu sixirtay. Dad badan oo saaxibbadeeda ka mid ah ayaa arrintaa awgeed dhabarka u jeediyay oo ka cararay.
Ugu dambeyntii, Kiama waxay go’aansatay in seygeeda ay soo ka xeysato oo uu la noolaado.
“Saddex sano ka dib, waxaan carruurteyda u sheegay in aan aabahood soo kaxayn doono oo aan ka soo xadi doono reerkisia,” ayay tiri.
Kiama iyo carruurteeda oo kaashanaya dhakhtar ku takhasusay cudurrada dhimirka waxay dejiyeen qorshihii ay David kga soo kaxayn lahaayeen halka uu ku nool yahay oo ah gurigii laga dhalay.
“Xilligaasi waxaa aad ugu baxay ciddiyaha, waxa ayna qaadanaysaa maalmo in jirkiisa la nadiifiyo. Sidoo kale tinta madaxa iyo garka ayaa aad ugu baxay oo wuxuu yeeshay muuqaal aad u fool xun.
David waxay dhakhaatiirtu ku sheegeen xanuunka maskaxda ku dhaca ee afka qalaad lagu yirahdo ‘bipolar disorder’, wuxuuna dhakhtar ku jiray muddo laba bilood ah. Tan iyo markii laga soo soo saaray cusbitalka, xaaladdiisa caafimaad waa ay ka soo reynaysay balse waxa uu wali qaataa dawooyin soconaya muddo dheer.
Xaaskiisa iyo carruurtiisa ayuu dib ula midoobay.
Kiama ayaa BBC-du u sheegtay in dhakhaatiirtu ay caruurteeda siiyeen talooyin wanaagsan oo ah in aabahood ay ku aqbalaan sida uu yahay isla markaana aysan marnaba lumen jeceylkii ay u hayeen, arrintaa oo ay sheegtay in ay qaateen.